ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုသည်လူ့ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် (၂၀၀၁) - Your Brain On Porn
ကြိုတင်ခန့်မှန်း (2001) ဆုချမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် modulates
Comments: ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ် dopamine ၏ပိုကြီး spikes ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဒါဟာအတိတ်၏ညစ်ညမ်းထံမှမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကွဲပြားခြားနားသောစေသည်ဘာလဲ
J ကို neuroscience ။ 2001 Apr 15;21(8):2793-8.
Bern GS, လူယာသည် SM, Pagnoni, G, ဂူ PR စနစ်.
စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ, ဆေးပညာ Emory တက္ကသိုလ်ကျောင်း, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ 30322, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုအချို့အတန်း, ဆုလာဘ်ဒေသများသက်ဝင်အတွက်အလွန်အမင်းထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဤဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုရစေရန်ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှု, နှုတ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေရဲ့ sequence ပေးပို့၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် modulated နိုင်ပါတယ်လူသားများတွင်ပြသပါ။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းရခက်သောအခါ, နှစ်ဦးစလုံးဟာနျူကလိယ accumbens အတွက်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လှုပ်ရှားမှုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် orbitofrontal cortex medial အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဘာသာရပ်များ၏ဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရေကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်မှာဆုလာဘ်ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း sensorimotor cortex ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည်။ ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဤတွေ့ရှိချက်များကြိုတင်ခန့်မှန်းလူ့ဆုလာဘ်တိုင်းဒေသကြီးများ၏တုံ့ပြန်မှု modulates နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ preference ကိုဒီတုံ့ပြန်မှုကနေ dissociated နိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, သောက်စရာများနှင့်လိင်သဘာဝဆုလာဘ်၏လိုက်စားလူ့အပြုအမူအပေါ်အဓိကပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာဆုလာဘ်လူ့အပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကို၏ပြဿနာအဓိကအားမဖြေရှင်းနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ၌ဤကွာဟချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းများစွာသောအချက်တွေရှိပါတယ်; သို့သော်တဦးတည်းအတားအဆီးလူ့အပြုအမူသို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကို Activation အပေါ်ဆုလာဘ်၏အထီးကျန်သက်ရောက်မှု defining နှင့်တိုင်းတာ၏ခက်ခဲခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, ဆုလာဘ်တစ်ခုစစ်ဆင်ရေးသဘောတရားအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်: ကအပြုသဘောတစ်ဦးအမူအကျင့်အားလျှင်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု (ကြိုးယူဆနေသည်Hull, 1943; Rescorla နှင့် Wagner, 1972; Robbins နှင့် Everitt, 1996), ထိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ တူညီသောအယူအဆသည်လူသားတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်လူသားများသည်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကိုအုပ်ချုပ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများတစ်ခုတည်းကပင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲကိုစုံစမ်းရန်မပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အလားတူစွာကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့်မနှစ်သက်မှုများအကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောအစီရင်ခံစာများ၊ ဥပမာ၊ ဦး စားပေးမှုများသည်လူတစ် ဦး စီ၏သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်သူတို့တင်ပြလိုသောအရာနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရန်တစ် ဦး တည်းတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ရမည့်အပြုအမူဆိုင်ရာရလဒ်၊ ထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ လူ့ဆုလာဘ်ဒေသများရှိလုပ်ဆောင်မှုသည်ပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြထားသည့် ဦး စားပေးမှုများထက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတင်းပို့သည်။
လူသားမြားသညျတှငျ, ဆုလာဘ်ဒေသများ၏ activation (ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အုပ်ချုပ်မှုအပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့မြင်နိုင်ပါသည်Breiter et al ။ , 1997); သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်း၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံး pharmacological သက်ရောက်မှု၏ပုံမှန်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကိုယ်စားလှယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ရေ (အဖြစ်ဒါခေါ်သည့်သဘာဝဆုလာဘ်ထက်အကျိုးကိုစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ပြုမူစေခြင်းငှါBradberry et al ။ , 2000; Carelli et al ။ , 2000) ။ အေးစက်ဆုလာဘ်, ဥပမာ, ပိုက်ဆံလည်း (အကျိုးကိုစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ပြုမူစေခြင်းငှါThut et al ။ , 1997; Elliott သည် et al ။ , 2000; Knutson et al ။ , 2000) နှင့်လူသားတွေအတွက်မူလတန်းဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုသင့်လျော်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအဓိကအားကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ activation များအတွက်အရေးပါ parameter သည် (ကြောင်းကိုသရုပ်ပြကြောင်းစမ်းသပ်ချက်များကအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်Schultz et al ။ , 1992, 1997; Schultz, 1998; Garry et al ။ , 1999) ။ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်ဇီဝကမ္မအသံသွင်း (တစ်ဦးသပ္ပါယ်ထုံးစံ၌ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်အာရုံခံ, နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral striatum တုံ့ပြန်ထိုကဲ့သို့သောသစ်သီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရေအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးမှသရုပ်ပြပါပြီShidara et al ။ , 1998) ။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု sequence ကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူ့ဟာသူ fMRI နှင့်အတူရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. တစ်ဦးထုံးစံ၌ဆုလာဘ်-related အာရုံကြောအဆောက်အဦများစုဆောင်းပေမည်။ ထိုမှတပါး, dopamine လွှတ်ပေးရန်၏သီအိုရီမော်ဒယ်များ (ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်သည်ဤဒေသများတွင် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ယူသင့်ကြောင်းအကြံပြုSchultz et al ။ , 1997) ။ ကျနော်တို့ punctate ၏ပာ, ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန် fMRI အသုံးပြု. ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
ဘာသာရပ်များ။ နှစ်ဆယ်ငါးသာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးပါးစပ်သစ်သီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရေဖြစ်စေ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာအုပ်ချုပ်ခံရစဉ် fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ခံယူ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ 18 ထံမှ 43 မှအသက်အရွယ်အတွက်အရွယ်ရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဘာသာရပ်များအတွက် Emory တက္ကသိုလ်လူ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကအတည်ပြုတဲ့ protocol ကိုများအတွက်အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏။
စမ်းသပ်တာဝန်။ အဆိုပါစကင်နာအတွက်နေစဉ်, ဘာသာရပ်များဖြစ်စေတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ထုံးစံ၌နှုတ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေတစ် sequence ပေးပို့ရှေးခယျြခဲ့: (1) လူသားမြားသညျအသီးဖျော်ရည်နှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံး Subject ပျြောမှေ့စဖြစ်ရှာဖွေနိုင်ရန် (2) နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်အမူအကျင့်တာဝန်များကိုအပေါ် nonhuman မျောက်ဝံများလေ့ကျင့်နေချိန်တွင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်; နှင့် (3) midbrain dopaminergic အာရုံခံနှင့်ပြီးသောသူတို့ပရောဂျက်ယူဆရသည့်အာရုံခံ, (sequential လှုံ့ဆော်မှုများ၏ယာယီကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ function ကိုအဖြစ်နှုန်းကိုပစ်ခတ်အတွက် phasic အပြောင်းအလဲများပြသSchultz et al ။ , 1992) ။ သင်တန်းသားများကိုနှစ်ခုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြေး (ပုံထဲမှာဖြစ်စေတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ထုံးစံအတွက်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 1) ။ ယင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြေးစဉ်အတွင်း, ဖျော်ရည်နှင့်ရေ boluses 10 စက္က၏သတ်မှတ်ထားတဲ့ကြားကာလမှာ alternated ခဲ့ကြသည်။ ခန့်မှန်းရခက်ပြေးစဉ်အတွင်း, ဖျော်ရည်နှင့်ရေအမိန့်ကျပန်းကြီးနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြားကာလတွင်လည်း 10 စက္က၏ယုတ်အတူ Poisson ကြားကာလဖြန့်ဖြူးနမူနာကောကျခွငျးအားဖွငျ့ randomized ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြေး5မိကြာ, ထိုသူနှစ်ယောက်ပြေး (ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်) ၏အမိန့်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး randomized ခဲ့သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်စေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်ကိုမသိရခဲ့အခြေအနေများ၏မကြာခဏခလုတ်တစ်ခုချင်းစီကတခြား, ဆိုလိုသည်မှာယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့် "ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်း," ကျနော်တို့စကင်ကိုပြေးတလွှားအခြေအနေများကိုခွဲခြားထက်သေးငယ်အခွအေနေလုပ်ကွက်သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခဲ့သောကြောင့် စကင်ကိုပြေးအတွင်း။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအားလုံးရှုထောင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြိုးကိုင်အပေါ် hinged သောကြောင့်, ကျနော်တို့ဘာသာရပ်များအတွင်းအခြေအနေများပြန်လုပ်မရွေးအစားဘာသာရပ်များ၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကလေ့လာနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်း။ တစ်ဦးက2×2factorial ဒီဇိုင်း preference ကို၏အကြောင်းရင်းများ (သီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရေ) နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း (ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်) နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များဖြစ်စေတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက် sequence ကိုအတွက်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေ 0.8 ml ကို boluses ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI အသုံးပြုခြင်း, ဦးနှောက်ကို Activation preference ကိုများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအဖြစ်သူတို့ကိုအကြားအပြန်အလှန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များနှစ်ခုပလပ်စတစ်ပြွန်မှတဆင့်သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံး၏ 0.8 ml ကိုပါးစပ် boluses ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအာဘော်အဆိုပါအာဘော်၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းနှင့်လက်ျာကနေရေထဲကနေထုံမွှန်းအဆိုပါသစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်အတူလျှာကျော်အရပ်ဌာန၌ Tube စွန်းကျင်းပခဲ့တယ်။ အဆိုပါပြွန် ~10 မီတာရှည်လျားခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကင်နာတဲ့အခန်းပြင်ပမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံး-controlled Dual-ပြွတ်စုပ်စက် (ဟားဗတ်ယန္တရား, Holliston, MA) နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကာလအတွင်းအခြားမည်သည့်တာဝန်လုပ်ဆောင်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအရည်အချိန်မျိုမှညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစကင်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့အရည် preference ကိုများအတွက် debriefed ခဲ့ကြသည်။
MRI အချက်အလက်များ၏သိမ်းယူမှု။ scanning တစ် 1.5 တက်စလာ Philips က NT ကင်နာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ high-resolution ကို T1 မာန်တင်းခန္ဓာဗေဒစကင်၏ဝယ်ယူပြီးနောက်ဘာသာရပ်များတစ်ဦးချင်းစီ (ပဲ့တင်သံ-ပြိုပုံရိပ်တို့ကိုစိစစ် 150 နှစ်ခုလုံးဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြေးခံယူ, gradient ကိုပဲ့တင်သံပြန်ပြောပြ; အထပ်ထပ်အချိန်, 2000 msec; အချိန်ပဲ့တင်သံ, 40 msec; ထောင့်လှန်, 90 °; 64 × 64 matrix, commissural လိုင်း anteroposterior ဖို့အပြိုင်ဝယ်ယူ 245မီလီမီတာ axial ချပ်) ကိုအသွေးအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) အကျိုးသက်ရောက်မှု (၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက်Kwong et al ။ , 1992; Ogawa et al ။ , 1992) ။ ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို padding နဲ့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေဖြင့်လျော့ချခဲ့သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ (; အဆိုပါဒေတာစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (သိမှု Neurology ၏ Wellcome ဦးစီးဌာန, လန်ဒန်, ဗြိတိန် SPM99) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်Friston et al ။ , 1995b) ။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသို့ရွေ့လျားမှုကိုပြုပြင်သည့်အရာသည်ခြောက်ချက်ပါသောတင်းကျပ်သောကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ မလွှဲမရှောင်မျိုခြင်းကိုသိသိသာသာ ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောကြောင့်, ရွေ့လျားမှု - ဆုံးမခြင်း parameters တွေကိုလည်း ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ရွေ့လျားမှုကိုတည့်မတ်ပေးသောပုံရိပ်များ၏ဆိုလိုရင်းကို 24-parameterine affine transformation ကို အသုံးပြု၍ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ 12-slice structure MRI သို့ coregistered လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုပုံများကို Montreal Neurological Institute (MNI) template သို့နေရာအနှံ့အပြားမှပုံမှန်ပြန်သတ်မှတ်ပေးသည်။Talairach နှင့် Tournoux, 1988) အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီး nonlinear အတိုင်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ် 12-parameter သည်ဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်း, လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် (Ashburner နှင့် Friston, 1999) ။ ပုံရိပ်တွေနောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါယာယီဒိုမိန်းအတွက် filtered တစ်ခု 8 မီလီမီတာ isotropic Gaussian kernel နဲ့တီးဝိုင်း-Pass နှင့်အတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကကျပန်းဆိုးကျိုးများ, အဖြစ်အပျက်-related, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (SPM99 နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်Friston et al ။ , 1995a, 1999) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခု2×2factorial ဒီဇိုင်းအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-နှစ်သက်သောအရည်, ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း-nonpreferred အရည်, ခန့်မှန်းရခက်-နှစ်သက်သောအရည်များနှင့်ခန့်မှန်းရခက်-nonpreferred အရည်: ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးကိုသီးခြားယေဘုယျ linear မော်ဒယ် (GLM) လေးပါးကိုဖြစ်နိုင်သမျှအဖြစ်အပျက်အမျိုးအစားများကိုကိုယ်စားပြုလေးအခြေအနေများနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်မှသက်ဆိုင်ရာကြိမ်နှင့်အတူမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေး virus သယ်ဆောင်လေးပါးအခြေအနေများအသီးအသီးအဘို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤယေဘုယျ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ convolved နှင့်လေးကော်လံဒီဇိုင်း matrix သို့ဝငျခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစကင်ကိုပြေး၏အဓိပ္ပါယ်ကိုတစ်ဦး voxelwise အခြေခံပေါ်မှာမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ 1 preference ကို၏အဓိကသက်ရောက်မှုမှစာအဆက်အသွယ်သုံးခုနှစ်ခုတဖက်သတ်ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေ [ဆနျ့ကငျြဘအားနည်းချက်ကို (11-1-11)], ကြိုတင်ခန့်မှန်း [ဆနျ့ကငျြဘအားနည်းချက်ကို (1-1-1)], နှင့်အပြန်အလှန်သက်တမ်း [ဆနျ့ကငျြဘအားနည်းချက်ကို (တွက်ချက် -1-11)] ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း preference ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှု modulates ဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေသီးခြားတနမူနာသုံးပြီးတစ်စက္ကန့်-Level ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဝငျခဲ့သညျ t အဆိုပါ GLM အတွက်တစ်ဦးချင်းစီသက်တမ်း (ခြောက်လထူးခွားသညျ့စုစုပေါင်း) ၏တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းဘို့စမ်းသပ် (DF = 24) ။ ကျနော်တို့ဒီအကျဉ်းချုပ်စာရင်းအင်းမြေပုံ thresholded p <0.001 (မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်မပြင်ဆင်ရ) ။ ဤမြေပုံများကို MNI ၏မြင့်မားသော resolution ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
သီအိုရီမော်ဒယ်။ ဒီဇိုင်းနှင့် fMRI စမ်းသပ်မှုပြန်ဆိုနှစ်ဦးစလုံးတစ် tool အဖြစ်ကျနော်တို့ကြိုးလှုံ့ဆော်မှု (ပုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောယာယီပုံစံများဖို့ဦးနှောက်တုန့်ပြန်မှ dopamine လွှတ်ပေးရေးရှိပြီးသားအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။2) ။ ဒါကမော်ဒယ်တစ်ဦး Synaptic အားဖြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာ, ဥပမာ, dopamine, (ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက်အမှားအယွင်းများမှတုန့်ပြန်လွတ်မြောက်လာကြောင်း postulates သောယာယီကွဲပြားခြားနားမှု (TD) ၏နည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်Schultz et al ။ , 1997) ။ ဒါကမော်ဒယ် (ထိုကဲ့သို့သော backgammon အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုအပါအဝင် applications များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်Sutton, 1988; Tesauro နှင့် Sejnowski, 1989), အဖြစ်အောင်မြင်စွာ (မြောက်မြားစွာအေးစက် Paradigm အတွက် dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခန့်မှန်းHouk et al ။ , 1995; ဂူ et al ။ , 1995) နှင့်မော်တာအစီအစဉ်တာဝန်များကို (Bern နှင့် Sejnowski, 1998).
အာရုံကြောစမ်းသပ်မှု၏ကွန်ရက်ကမော်ဒယ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများ။ A, ပုံကြမ်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏ sequence ကို dopaminergic output ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ဖော်ပြသည်။ ဒီအယူအဆတှငျကြှနျုပျတို့ dopaminergic output ကိုပြောင်းလဲတဲ့ fMRI BOLD တိုင်းတာခြင်းအတွက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. တစ်ဦးထုံးစံ၌ပစ်မှတ်အာရုံကြောအဆောက်အဦများသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ညွှန်ပြကြသည်။ အဆိုပါသီးဖျော်ရည်နှင့်ရေကနျ့အခြိနျ မှစ. အာရုံခံ (Project နှစ်ခုလုံးရှိသည်ဖို့ပြသနေကြသည်ဝင်းဒိုးကိုသေတ္တာ) နှင့်ဆုလာဘ် (ထို r ကိုလမ်းကြောင်းdopaminergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒီအယူအဆကနေတစ်မျှော်မှန်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကျနော်တို့ (ကကနျ့အချိန်ပြတင်းပေါက်လုပ်သေးငယ်တဲ့သေတ္တာများ အသီးဖျော်ရည်နှင့်ရေအတွက်), ချက်ချင်းဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ထားသည့်r(t) (1 ဖျော်ရည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည်မှန်လျှင်, 0.5 ရေဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်,0အဘယ်သူမျှမနှိုးဆွဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်) ။ ဤသည်ခဲ့ကြောင်းမတရားဖမ်းဆီးရေနှစ်ကြိမ်တန်ဖိုးဖျော်ရည်ထားကြ၏။ ဒါကမော်ဒယ်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးအဓိကမျှော်လင့်များအတွက်အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။B, ဖျော်ရည်နှင့်ရေဖြန့်ဝေ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ပာဘို့ dopamine အကျိုးသက်ရောက်မှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အလျားလိုက်ဝင်ရိုး စကင်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး တစ်ဦးခေတ္တယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်အားဖြင့်ခန့်မှန်းမျှော်မှန်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအပေါ်စကေး ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး မတရားဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုပါရန်အရေးကြီးသောအချက်ခန့်မှန်းရခက်ပြေးတစ်လျှောက်လုံးက high-လွှဲခွင်ဖြစ်နေဆဲသော်လည်းယင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြေး,0မှဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းနေတဲ့ယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်၏ output နဲ့ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု kernel ကို convolving အားဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဒါကလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းရခက်သောအခါပျမ်းမျှ BOLD တုံ့ပြန်မှု သာ. ကြီးလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုသည်။
အတိုချုပ်, TD သင်ယူမှုနှစ်ခုမူလတန်းယူဆချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပထမဦးစွာပေးထားသောအာရုံကြောဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ရေတိုရေရှည်လိုက်လျောညီထွေအားလုံးအနာဂတ်ဆုလာဘ်တစ်ခုလျှော့ပေါင်းလဒ်ခန့်မှန်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အကျိုးကို၏အဓိပ္ပါယ်ကလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ဦး putative ဆုလာဘ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်အပြုအမူများ၏ဖြစ်ပျက်မှုတိုးပွါးလျှင်, ဒါဟာအပြုသဘောစစ်ကူယူဆနေသည်။ တိရစ္ဆာန်ဝသောအခါတိရစ္ဆာန်၏ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီး, တူညီတဲ့ဆုလာဘ်, ဥပမာ, တစ်ဦးအမူအကျင့်အားဖြည့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သဘာဝဖြစ်သည့်တစ်ဦး fMRI စမ်းသပ်မှု၏အခြေအနေတွင်, ထိုကဲ့သို့သောရေသို့မဟုတ်သစ်သီးဖျော်ရည်အဖြစ်အကျွမ်းတဝင်အစာစားချင်စိတ်ဥစ္စာ Subject သာယာသောကြောင့်ကြိုးအဖြစ်ကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာဆုလာဘ်ဟောကိန်းများတစ်နှိုးဆွထား၏လက်ရှိကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်သာမူတည်သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုကိုယ်စားပြုမှုမော်ဒယ်အတွက်အတန်ငယ်စိတ်ထင်သလိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အချိန်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုသဲလွန်စမှတဆင့်နောက်ပြန်အချို့ကိုယ်စားပြုမှုပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရေသို့မဟုတ်သစ်သီးဖျော်ရည်အဖြစ်တ္ထုများအဘို့, နှစ်ဦးစလုံးအာရုံခံအတိုင်းအတာ (လျှာပေါ်မှာဥပမာအပူချိန်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောအာရုံခံစားမှု) နှင့်ဘာသာရပ်အပျြောအပါးအဖြစ်ကြုံတွေ့သောအမှန်တကယ်ဆုလာဘ်, အဲဒီမှာတည်ရှိ။ ဒါကြောင့်ကြားနေနှင့်ကြိုးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်ကွဲပြားနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အရည်ပေးပို့များ၏ထိတွေ့နိုင်သောအတိုင်းအတာစဉ်းစားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ အလားတူပင်ဤကွဲပြားအတိုင်းအတာ fMRI နှင့်အတူ imaged နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုဆားကစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ယူဆနေကြသည်။ fMRI နှင့်အတူရရှိသောတိုင်းတာခြင်းမှအလားတူတဲ့ရှုထောင်ပေါ်သို့မော်ဒယ် output ကို map စေရန်, ငါတို့သည် ventral striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဆုံယူဆသောကြားနေနှင့်ကြိုးလမ်းကြောင်း, နှစ်ဦးစလုံး၏အကျိုးရလဒ်များချုပ်ဖော်ပြ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအဘို့အဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေရှိကွောငျးအသိအမှတျပွု, နှင့်တိကျသောအဲဒီ receptor အပေါ်မူတည်ပြီး dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ် variable ကိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အတိအကျစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း Matlab 5.3 (MathWorks, Natick, MA) နဲ့ simulated ခဲ့သောမော်ဒယ်မှ input ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်နှစ်ခုလုံး putative dopamine အာရုံခံမှသက်ဆိုင်ရာနှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ပြေး (ပုံများအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ 2).
ကျနော်တို့ related အပြုအမူတာဝန်များကိုလျှက်မျောက်ဝံများအတွက် dopaminergic အာရုံခံအတွက်ဆူး output ကိုပြောင်းလဲဖော်ပြအတွက်၎င်း၏ယခင်အောင်မြင်မှုအပေါ်အခြေခံသည် (အောက်တွင်) ကိုယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအနက်ကိုရှင်းပြဖို့ကြောင်းစာဖတ်သူများထွက်ထောက်ပြဖို့သတိထားရပါမည်။ ထို့အပြင်လောက်နိုင်သောအခြားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ကွန်ပျူတာဖော်ပြချက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scan ဖတ်ပြီးနောက်, ဘာသာရပ်များနှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုဘို့မိမိတို့ preference ကိုအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ 25 ဘာသာရပ်များ (72%) ပိုမိုနှစ်သက်ဖျော်ရည်နှင့်ကျန်ရှိသောပိုမိုနှစ်သက်ရေတသောင်းရှစ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤများကိုတွက်ချက်ရန်သူတို့ကိုမမေးခဲ့ဘူးပေမယ့်အများစုကဘာသာရပ်များ, တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးကွဲပြား preference ကိုခဲ့ရသည်။ သိသာထင်ရှားသောခေါင်းကိုရွေ့လျားမှုဟာ Scan ဖတ်ကာလအတွင်းရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုပတ်လည်ဘာသာနှင့်လည့်သားအပေါငျးယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ကြပြီးအခြေအနေမဆိုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်ယုတ်± SD ကဘာသာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအခြေအနေ 0.041 ± 0.069 မီလီမီတာနှင့်ခန့်မှန်းရခက်အခြေအနေ 0.044 ± 0.069 မီလီမီတာ (တွဲခဲ့သည် t စမ်းသပ်မှု;p = 0.853) ။
ဦးစားပေးအရည်ဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု nonpreferred အရည် (စားပွဲတင်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းနည်း differential ကိုလှုပ်ရှားမှုဆွေမျိုးပြသ1) ။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens, hippocampus, ဒါမှမဟုတ် medial prefrontal cortex အဖြစ်ဂန္ထဝင်ဆုလာဘ်ဒေသများအတွက်မဆိုသိသာလှုပ်ရှားမှုခြားနားချက်ကိုမမွငျခဲ့ပါဘူး။ ပိုမိုနှစ်သက်သော၊ ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိသောသူများအတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲသည်ပါးစပ်နှင့်လျှာဒေသအနီးရှိinရိယာအတွင်းရှိ somatosensory cortex တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (t = 4.19, MNI, -60, -12, 16) ကိုသြဒိနိတ်။
တိုင်းတာလှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုပြသဦးနှောက်ဒေသများ (p <0.001 အမှားပြင်; စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား> 10 voxels, မှတ်ချက်ချသည်မှလွဲ။ )
ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက် preference ကို (ပုံ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 3) ။ ယင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြေးဖို့ခန့်မှန်းရခက်ပြေးဆွေမျိုးများအတွက်နှစ်နိုင်ငံ activation နျူကလီးယပ် accumbens (စားပွဲတင်ပါဝင်သည်ကြောင်း medial orbitofrontal cortex ၏ကြီးမားသောကြက်၌လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် 1) ။ activation ၏အပိုဆောင်းဒေသများနှစ်နိုင်ငံနှင့် paracentrally parietal cortex ၏ကြီးမားသောဧရိယာနှင့်အဆိုပါ thalamus ၏လက်ဝဲ mediodorsal နျူကလိယနှင့်ညာဘက် cerebellum နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သေးငယ်တဲ့ focal Active ပါဝင်သည်။ ဤအဒေသများအဘယ်သူအားမျှ preference ကို၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူခေသောကြောင့်, သူတို့လုပျသငျမသက်ဆိုင် preference ကို၏, ခန့်မှန်းရခက်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ခဲ့ကြသည်။ ခန့်မှန်းရခက်ပြေး, လက်ျာသာလွန်ယာယီ gyrus activated ခံခဲ့ရသည်၏ဧရိယာအဖြစ်ဘယ်ဘက် precentral gyrus နှင့်ညာဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အတွက် focal Active ဖို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြေးဆွေမျိုးများအတွက်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ဆုလာဘ်-related ဒေသများခန့်မှန်းရခက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ် BOLD တုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ A, (0, 4, -4) မှာဗဟိုပြုလေယာဉ် (နှစ်နိုင်ငံနျူကလိယ / ventral striatum accumbens ကြောင်းပြသNAC) နှင့်နှစ်နိုင်ငံသာလွန် parietal cortex ဟာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအခြေအနေပိုမိုတက်ကြွစွာခဲ့ကြသည်။ Bလက်ျာသာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဒေသအတော်လေးပိုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ခဲ့သည်။ အဓိပ်ပာယျမှာ thresholded ခဲ့သည်p <0.001 နှင့်အတိုင်းအတာ> 10 တဆက်တည်း voxels ။
တဦးတည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလွတ်လပ်စွာနှစ်ဦးစလုံးအဓိကသက်ရောက်မှု၏အခြား modulated ရသော preference ကိုများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်။ လက်ျာ insula, လက်ဝဲ posterior cingulate နှင့်ညာဘက် cerebellum ဟာဆနျ့ကငျြဘ (ဦးစားပေး-nonpreferred) × (ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း-ခန့်မှန်းရခက်) အတွက်သိသိသာသာအပြန်အလှန်ဖော်ပြပေး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆနျ့ကငျြဘ, (ဦးစားပေး-nonpreferred) × (ခန့်မှန်းရခက်-ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း), မှာသိသိသာသာမဆို Active ထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့ p <0.001 အဆင့်; သို့သော်လက်ဝဲသာလွန်သောယာယီ gyrus (MNI ကိုသြဒီနိတ်၊ -48, -4, -16) ရှိဒေသငယ်တစ်ခုမှာသိသာထင်ရှားသည်။ p <0.01 အဆင့် (t = 3.15) ။
အဆိုပါကွန်ပျူတာခြင်း simulation ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူမြားကို (ပုံထက်ပိုပြီး dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျလာသောသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။2 B) ။ အဆိုပါဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနေကြသည်အခါ, တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုဿုံနောက်ဆက်တွဲတစ်ဦးခန့်မှန်းထားသည်နှင့် dopamine ကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ယူဆသောအမှား signal ကို, တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းစေပါသည်။ အဆိုပါဆုခန့်မှန်းရခက်နေကြသည်အခါ, အဲဒီမှာစနစ်သင်ယူဖို့အဘို့အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်, တစ်ဦးချင်းစီနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ခွဲခြာသရုပ်ပြနှင့် preference ကို၏အစီရင်ခံစာများ subjective ရန်။ preference ကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသီးသန့် cortical ခဲ့ပေမယ့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း midbrain dopaminergic အာရုံခံ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လူသိများဆုလာဘ်စနစ်များတိကျတဲ့ activation ပြသခဲ့သည်။ ဒီဆုလာဘ်ဒေသများ၏ activation သောလူသားမြားပျြောမှေ့ကြောင်းယူဆပါတယ်လျှင်, ဒီတွေ့ရှိချက် preference ကို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာ conditional အပြုအမူတွေ၏အစွမ်းထက်ဆုံးအဖွတျဖွစျဖို့လူသိများအာရုံကြောဆားကစ်ကနေ dissociated စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါရေနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးသိသိသာသာလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်စေ, ဤတုံ့ပြန်မှုအချို့လုပ်ငန်းတာဝန်များ၏မော်တော်ရှုထောင့်မှအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒီဒေသတိကျတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဦးစားပေးများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏ရှုထောင့်သို့ပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ preference ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ် cortical ဒေသများမှကန့်သတ်, နှင့်ဦးစားပေးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကဤဒေသများတွင် သာ. ကြီးမြတ် activation မှုခံခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားဒေသများ (လျှာကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုစဉ်အတွင်း activated ခံရဖို့လူသိများ sensorimotor cortex အနီးရှိအိပ်ရCorfield et al ။ , 1999) နှင့်မျိုချ (Hamdy et al ။ , 1999) ။ လျှာသည်လှုပ်ရှားမှုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ယခင်အလုပ်ခုနှစ်, cerebellum ၏သိသိသာသာ activation, preference ကို၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အထူးသပျက်ကွက်တဲ့တွေ့ရှိချက်ရှိ၏။ အဆိုပါ differential ကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု, ဆိုလိုသည်မှာ, ဦးစားပေး-nonpreferred, activation ၏ဘုံဒေသများဖယ်ရှားပေး; ထို့ကွောငျ့, cerebellar activation ၏မရှိခြင်း differential ကိုလျှာကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ preference ကိုများအတွက် cortical activation ၏ပုံစံများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တစ်ဦး somatosensory ဒေသဖော်ပြထားသော preference ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုတချို့ differential ကိုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအဓိကအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ဧရိယာထဲမှာနှင့်မဂန္ထဝင်ဆုလာဘ်ဒေသများ၌ထငျရှားခဲ့ကြောင်းအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအဖြစ်အခြားကျော်တဦးတည်းပစ္စည်းဥစ္စာသတ်မှတ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်ပေမယ့်, နှစ်ဦးစလုံးအရည်ဆန္ဒရှိဖြစ်ခြင်းတ contradistinction အတွက်, ပျြောမှေ့စဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှေးခယျြခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးအရည်ယေဘုယျအားပျြောမှေ့စခဲ့ကြသောကြောင့်, preference ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆုလာဘ်ဒေသများတွင်သိသိသာသာလှုပ်ရှားမှုကွာခြားချက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ပါပြီမဟုတ်ပေလိမ့်မည်။ ဤသည် midbrain dopamine အာရုံခံဦးစားအစာစားချင်စိတ်များက activated ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်ထက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ် (Mirenowicz နှင့် Schultz, 1996) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် ( "လို" "အကြိုက်" ကဲ့သို့အလားတူမဟုတ်ကြောင်းယခင်ယူဆချက်ကိုထောက်ပံ့သောရိုးရှင်းသောဆုလာဘ်အနေဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ preference ကိုတစ်ဦးစနစ်အကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုRobinson နဲ့ Berridge, 1993).
preference ကို, အနျူကလိယ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခန့်မှန်းရခက်, thalamus, နှင့် orbitofrontal cortex medial ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမတူဘဲ သော်လည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းညာဘက်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအများစုနေထိုင်ပြီးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ယခင်ဒေသများ (လူသိများ dopamine projection က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူနီးကပ်စွာကိုက်ညီတဲ့Koob, 1992; Cooper က et al ။ , 1996) ။ ဒါဟာခန့်မှန်းရခက်မဟုတ်, preference ကိုဤဆုလာဘ်ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့အတန်ငယ်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအဒေသများတွင်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်လျှင်, တဦးတည်းခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူတွေကိုထက်ပိုပျြောမှေ့စခဲ့ကောက်ချက်ချပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘာသာရပ်များအများစုသည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်သောအခြေအနေများအကြားမည်သည့်ခြားနားချက်ပိုင်းခြားမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူတွေကိုထက်ပိုပျြောမှေ့စခဲ့ကြ, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်လျှင်, ဒီဟာမသိစိတ်တစ်ပိုင်းအဆင့်မှာဖြစ်ပေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက် (dopamine မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်မှတိုးမြှင့်ပမာဏသာရှိပြန်လွတ်လာကြောင်းခိုငျလုံမှုမရှိဂူ et al ။ , 1996; Schultz et al ။ , 1997;Schultz, 1998) ။ Dopamine (အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်Cooper က et al ။ , 1996) နှင့်လည်းတိုက်ရိုက်ပါ (microvasculature ကျပ်ဖြစ်နိုင်သည်Krimer et al ။ , 1998), ဒါပေမဲ့တိုးမြှင့် accumbens လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း (ကိုကင်းများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Breiter et al ။ , 1997) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ခန့်မှန်းရခက်တွေနဲ့ activation ၌အကြှနျုပျတို့၏လေ့လာတွေ့ရှိတိုးတိုးလာ dopamine လွှတ်ပေးရေးရန်, ဖြစ်စေသည့် accumbens စီမံကိန်းများကြောင့် VTA ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကမော်ဒယ်ရလဒ်များကိုနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုရာ၏ VTA နေ Project, အားလက်ခံတွေ့ဆုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ related နိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါတို့သည်ထို BOLD တုံ့ပြန်မှုသာအပြောင်းအလဲများ dopaminergic ဂီယာအဘယ်သူမျှမလွတ်လပ်သောအတိုင်းအတာများ (1) စုံတွဲ BOLD signal ကိုပြောင်းလဲဖို့ dopaminergic ဂီယာတိုးမြှင့်မည်ဟုသောယန္တရားများမသိသောများမှာ (2), နှင့်: ဤအနက်နှစ်ခုအရေးကြီးသောအချက်အလက်များများကစနစ်ဖြစ်ပြီးရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသွယ်ဝိုက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်ဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တစ်ခု fMRI စမ်းသပ်မှုများတွင်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မရနိုင်ပါ။ ဒါဟာ (သို့သော် dopamine ငွေကြေးမက်လုံးပေး၏အခြေအနေများအောက်၌ ventral striatum သို့ဖြန့်ချိကြောင်း positron ထုတ်လွှတ် tomography သုံးပြီးယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Koepp et al ။ , 1998) ။ ခန့်မှန်းရခက်၏အသံချဲ့စက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ coupled ကြောင့်လည်းအာရုံခံ "အမြတ်" ပေါ်တွင် dopamine ၏ယူဆချက်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Cohen ကိုနှင့် Servan-Schreiber, 1992), အဆုံးနှင့်အတူအချို့သောဒေသများကိုတိုးပွါးစေနှင့်အခြားသူများကိုလျော့ချလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပေါ်။
ခန့်မှန်းရခက်သဖြင့်အတော်လေး activated တိကျသောဒေသများအစာစားချင်စိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများသို့စာအဆက်အသွယ်။ နျူကလီးယပ် accumbens မှထို့အပြင် medial orbitofrontal cortex ခန့်မှန်းရခက်များအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ဤဒေသ (အရသာအာရုံ၏အကြိုးနှင့်ကြားနေရှုထောင့်နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ဖို့မျောက်ဝံများမှာပြခဲ့ပြီးအဓိကအားသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Rolls, 2000) ။ ဤဒေသကိုလည်း (အကျိုးသည်ဆွေမျိုး preference ကိုခွဲခြားမှုကြောင့်အာရုံခံပါရှိသည်Tremblay နှင့် Schultz, 1999) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex ကြောင့်နှာခေါင်း sinuses (ထံမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပုံမှန်အား fMRI နှင့်အတူပုံရိပ်ကိုဖို့ခက်ခဲသည်Ojemann et al ။ , 1997) ။ သို့သော်ကျနော်တို့ဖော်ထုတ်သောဒေသယေဘုယျအားဖြင့်ပုံမှန်အတိုင်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းတည်နေရာသာလွန်နှင့် caudal ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသသည်ယခင်က (သာယာသောအရသာမှတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ထားပြီFrancis က et al ။ , 1999) ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ဒေသ, အသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, အဖြစ်ကောင်း task ကို၏အကြိုးရှုထောင့်မဟုတ်ဘဲအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲမှုများ၏ရလဒ်မှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤဒေသသည်ယခင်ကအထူးသဖြင့်မျှော်လင့်ချိုးဖောက်မှုများ (ကာလအတွင်း visuospatial အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးNobre et al ။ , 1999) ။ နောက်ထပ်ဒေသ, လက်ဝဲယာယီ cortex အတွက်ခန့်မှန်းရခက်နေဖြင့်တစ်ဦးနယ်စပ်ဒေသသိသိသာသာမော်ဂျူပြသခဲ့သည်။ မကြာသေးမီ fMRI စမ်းသပ်ချက်များတွင်ဘယ်ဘက်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး sequential လှုံ့ဆော်မှုများကြိုတင်ခန့်မှန်း processing နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Bischoff-Grethe et al ။ , 2000) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒီဒေသလွတ်လပ်စွာလှုံ့ဆော်မှု valence ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ယေဘုယျစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှုမှကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ထိုအယခင်တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့။
ကျနော်တို့ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် modulatory ထုံးစံ၌ခန့်မှန်းရခက်တုံ့ပြန်အဖြစ်ဖော်ထုတ်သောဦးနှောက်ဒေသများဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်အပေါ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ပိုက်ဆံလူသားအကြိုးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရှုပ်ထွေးအေးစက်မှတဆင့်ဤအဂုဏ်သတ္တိများကိုဝယ်ယူထားပြီးသာဖြစ်သောကြောင့်အားဖြည့်နေပါတယ်။ ကိုကင်းသည့်သဘာဝစစ်ကူ (ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံအပေါ်ပြုမူသောတွေ့ရှိချက်ဆင်တူCarelli et al ။ , 2000), ထိုသို့သောပိုက်ဆံအဖြစ် conditional စစ်ကူ, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ရေကဲ့သို့သဘာဝကစစ်ကူထက်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောစနစ်များအပေါ်ပြုမူတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့် midbrain နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လုပ်ဆောင်ချက် (ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီThut et al ။ , 1997;Delgado et al ။ , 2000; Elliott သည် et al ။ , 2000; Knutson et al ။ , 2000), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေအထူးသပျက်ကွက်တဲ့တွေ့ရှိချက်။ ယခင်ကမှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, ဖျော်ရည်နှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံးအနည်းငယ်ပျြောမှေ့စခဲ့ကြ, ငါတို့သည်သီအိုရီမော်ဒယ်အတွက်အနည်းငယ်ကွာခြားချက်ယူဆပေမယ့်ဒါအကြွင်းမဲ့အာဏာဆုလာဘ်တစ်ခုသိသိသာသာကွာခြားချက်ရှိပါပြီမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်ငါတို့သည်လည်းဒီခြားနားချက်အဘို့အကောင့်ရသောမည်သည့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်တစုံတခုကိုမျှ, မသုံးခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ခန့်မှန်းရခက်သဖြင့်ထိခိုက်သို့မဟုတ် amplified ခံရဖြစ်စေအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာဒေသများတွင် (ယခင်ကငွေကြေးဆုလာဘ်၏ဆက်စပ်မှီခိုဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်တွေ့ရသောဒေသများတွင်ဖို့စာအဆက်အသွယ်ရော်ဂျာ et al ။ , 1999; Elliott သည် et al ။ , 2000) ။ အထူးသဖြင့်, ထို subgenual cingulate နှင့် medial thalamus နှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာခန့်မှန်းရခက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်နှင့်အနေဖြင့်ရှေ့နောက်စကား-မှီခိုဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည် Elliott သည် et al ။ (2000).
ကြိုတင်ခန့်မှန်း preference ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှု modulated သောကြောင့်, ကခန့်မှန်း၏အလားအလာသတင်းရင်းမြစ်ခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦးဂန္အေးစက်စမ်းသပ်မှုများတွင်တစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအကျိုးကို precedes ။ လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ယခင်ကကြားနေနှိုးဆွဟာခန့်မှန်း, ဒါမှမဟုတ် conditional နှိုးဆွဖြစ်လာသည်။ fMRI အတွက်ပါးစပ်လှုံ့ဆော်မှုများအသုံးပြုမှုအပေါ်နှိုင်းယှဉ်အနည်းငယ်ဒေတာရှိပါတယ်ကြောင့်, ကျနော်တို့နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပါးစပ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တာဝန်, ရေနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်၏မော်တော်ရှုထောင့်များအတွက်စမ်းသပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုအတွက်ခန့်မှန်း၏အရင်းအမြစ်သေချာပေါက်သူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ sequence ကိုထံမှလာ၏။ အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်, ဒီထိုကဲ့သို့သောအမြင်အာရုံ cue အဖြစ်နောက်ထပ်လှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းမိတ်ဆက်ထက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုကြိုးကြောင့်ကျနော်တို့အေးစက်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကောက်ချက်မချနိုင်။ ယင်းသီအိုရီမော်ဒယ် (နှစ်ဦးစလုံးSchultz et al ။ , 1997) နှင့် neurophysiological ဒေတာ (Schultz et al ။ , 1992, 1993) ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများဆုလာဘ်ပေးပို့ရှေ့အဆိုပါကြားကာလအတွင်းမှာတွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဲဒီလိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ကျော်အချိန်အတိုင်းအတာမသိသောကြောင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ရိုးရှင်းစွာနှစ်ခုအခြေအနေများ, အဖြစ်စမ်းသပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများအကြားတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြားကာလထိန်းသိမ်းခြင်းအသုံးပြုပုံ 10 စက္က, interstimulus အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြေရှင်းရန်မလုံလောက်အချိန်ရှိ၏။ ယူဆရထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, ဤတစ်ကွဲပြားခြားနားဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
အချုပ်အား, လူ့ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောရေနှင့်ဖျော်ရည်အဖြစ်မူလတန်းဆုလာဘ်၏ယာယီကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် modulated နိုင်ပါသည်။ ဤရလဒ်သည်အမှားများကိုဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးလူသား nonhuman မျောက်ဝံများဤကောက်ချက်တိုးချဲ့ကြောင်း postulate ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များအဘို့အအရေးကြီးသောထောက်ခံမှုပေး။ ဒီမော်ဂျူ၏ဒေသဆိုင်ရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်လည်းသတင်းအချက်အလက်တစ်လှုံ့ဆော်မှုစီး၏ဆွေမျိုးကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်ခံပြီးသည်အတိုင်း, fMRI နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်အာရုံကြောငွေကြေးကိုတစ်ပုံစံဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
Received နိုဝင်ဘာလ 11, 2000 ။
တည်းဖြတ်မူလက်ခံရရှိ ဇန်နဝါရီလ 17, 2001 ။
လက်ခံ ဇန်နဝါရီလ 26, 2001 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ရေး K08 DA00367 (GSB မှ) နှင့် RO1 DA11723 (PRM မှ), Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းသုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ (GSB), နှင့်ကိန်းမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း (PRM) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကူအညီအတွက်အိပ်ချ်မော်စီတုန်း, R. ဘုရင်နှင့်အမ်မာတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူဂရက်ဂိုရီအက်စ် Bern, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, ဆေးပညာ Emory တက္ကသိုလ်ကျောင်း, 1639 ပီယပ် Drive ကို, Suite 4000, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ 30322, E-mail ကိုဖြစ်စေမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ:[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်], ဒါမှမဟုတ် P. ဖတ်ဂူ, အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဆေးပညာ Baylor College မှာ, 1 Baylor ပလာဇာ, ဟူစတန်, တက္ကဆပ် 77030, E-mail ကို၏ဌာနခွဲ:[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
(1999) အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီး Nonlinear Spatial ပုံမှန်။ Hum ဦးနှောက် Mapp 7:254-266.
(1998) အဆိုပါ Basal ganglia ပာထုတ်လုပ်ရန်ဘယ်လိုကွန်ပျူတာမော်ဒယ်။ J ကိုသိမြင် neuroscience 10:108-121.
(2000) Wernicke ၏inရိယာ၌ nonverbal ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏သတိနှင့်သတိလစ်အပြောင်းအလဲနဲ့။ J ကို neuroscience 20:1975-1981.
(2000) မျောက်တွေကိုအတွက် mesolimbic နှင့် sensorimotor striatum အတွက် extracellular dopamine အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်ကိုကင်းတွေကိုသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience 20:3874-3883.
(1997) လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ 19:591-611.
(2000) အထောက်အထားများအနျူကလိယအတွက်သီးခြားအာရုံကြောဆားကစ် "သဘာဝ" (ရေနှင့်အစားအစာ) ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်အန်ကုက်လုပ်ကိုကင်း accumbens သော။ J ကို neuroscience 20:4255-4266.
Cohen ကို JD,
(1992) context, cortex နှင့် dopamine: schizophrenia အတွက်အပြုအမူနှင့်ဇီဝဗေဒတစ် connectionist ချဉ်းကပ်။ Psychol ဗြာ 99:45-77.
Cooper က JR,
(1996) neuropharmacology များ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအခြေခံ, Ed က7။ (အောက်စဖို့ UP, New York ).
က Fink GR,
(1999) လူသားတွေအတွက်လျှာကိုလှုပ်ရှားမှု၏ cortical နှင့် subcortical ထိန်းချုပ်မှု: fMRI သုံးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှု။ J ကို Apple က Physiol 86:1468-1477.
(2000) အဆိုပါ striatum အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုခြေရာခံ။ J ကို Neurophysiol 84:3072-3077.
Elliott သည် R,
(2000) လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက် Dissociable အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ J ကို neuroscience 20:6159-6165.
Francis က S,
Smith က E
(1999) ဦးနှောက်နှင့်အရသာနှင့် olfactory ဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သာယာသောထိတွေ့၏ကိုယ်စားပြုမှု။ NeuroReport 10:453-459.
(1995a) fMRI နှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု Characterizing: တစ် multivariate ချဉ်းကပ်။ NeuroImage 2:166-172.
(1995b) အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်အတွက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်။ Hum ဦးနှောက် Mapp 2:189-210.
(1999) ဘယ်နှစ်ယောက်ဘာသာရပ်များလေ့လာမှုတစ်ခုဖွဲ့စည်း? NeuroImage 10:1-5.
Walker က QD,
(1999) intracranial Self-stimulation ထံမှနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး Dissociation ။ သဘာဝ 398:67-69.
အဘိဓါန် Lau H,
(1999) လူ့ volitonal မျိုစဉ်အတွင်း cortical activation: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှု။ နံနက် J ကို Physiol 277:G219-G225.
(1995) အဆိုပါ Basal ganglia အားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအာရုံကြောအချက်ပြ generate အသုံးပြုမည်သို့တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ in အဆိုပါ Basal ganglia အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏မော်ဒယ်များ, eds Houk JC, Davis က JL, Beiser DG (MIT က, ကင်းဘရစ်, MA), စစ 249-270.
(1943) အပြုအမူ၏အခြေခံမူ။ အပြုအမူသီအိုရီတစ်ခုမိတ်ဆက်စကား။ (Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts, New York ).
(2000) တစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု FMRI visualization ။ NeuroImage 12:20-27.
(1998) ဗီဒီယိုဂိမ်းကာလအတွင်း striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်သေအထောက်အထား။ သဘာဝ 393:266-268.
(1992) အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် function ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 13:177-184.
Williams က GV,
(1998) ဦးနှောက် microcirculation ၏ Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience 1:286-289.
Cohen ကို MS,
(1992) မူလတန်းအာရုံခံဆွစဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု dynamic သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 89:5675-5679.
(1996) မဟုတ်ဘဲဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုထက်အစာစားချင်စိတ်များက midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဦးစားပေး activation ။ သဘာဝ 379:449-451.
(1995) ပျားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုကို အသုံးပြု. မမှန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် foraging ။ သဘာဝ 376:725-728.
(1996) ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်။ J ကို neuroscience 16:1936-1947.
(1999) Orbitofrontal cortex အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှု၏တာဝန်များကိုအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းပြိုပျက်ရာတို့ကိုစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်။ နတ် neuroscience 2:11-12.
(1992) အာရုံခံဆွပူးတွဲအခ်ါ signal ကိုအပြောင်းအလဲများကို: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 89:5951-5955.
(1997) gradient ကို၏ခန္ဓာဗေဒပြည်တွင်းနှင့်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပဲ့တင်သံ-ပြို fMRI လွယ်ကူစွာထိခိုက်ပိုငျးပြန်လည်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ NeuroImage 6:156-167.
(1972) Pavlovian အေးစက်နှင့်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် Non-အားဖြည့်များ၏ထိရောက်မှုကိုတစ်သီအိုရီ။ in classical အေးစက်။2။ လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ, eds Black က AH, Prokasy WF (Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts, New York ), စစ 64-69.
(1996) ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Neurobehavioral ယန္တရားများ။ Curr Opin Neurobiol 6:228-236.
Williams က EJ,
(1999) သေးငယ်ဖွယ်ရှိဆုလာဘ်များနှင့်ကြီးမားသော, မဖြစ်နိုင်ဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်ခြင်းယုတ်ညံ့ခြင်းနှင့် Orbital prefrontal cortex မြှင့်လုပ်ဆောင်။ J ကို neuroscience 19:9029-9038.
(2000) အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ဆုလာဘ်။ Cereb Cortex 10:284-294.
(1998) dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol 80:1-27.
(1992) ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ခြင်းမှဆက်စပ်မျောက် ventral striatum အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ J ကို neuroscience 12:4595-4610.
(1993) တစ်ဦးနှောင့်နှေးတုန့်ပြန်တာဝန်သင်ယူခြင်း၏အဆက်ဆက်ခြေလှမ်းများစဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော်မှုဆုချခြင်းနှင့်အေးစက်မှမျောက် dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်ချက်။ J ကို neuroscience 13:900-913.
(1997) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275:1593-1599.
(1998) စမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းစီးရီးမှတဆင့်တိုးနှင့်ပတ်သက်သောမျောက် ventral striatum အတွက်အာရုံခံအချက်ပြမှုများ။ J ကို neuroscience 18:2613-2625.
(1988) ယာယီကွဲပြားခြားနားမှုများ၏နည်းလမ်းများအားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့သင်ယူခြင်း။ Mach Learn 3:9-44.
(1988) လူ့ဦးနှောက်၏ co-ပြို stereotaxic Atlas ။ (Thieme, စတုဂတ်, ဂျာမနီ).
(1989) backgammon ကစားရန်သိတော့သောအပြိုင်ကွန်ယက်ကို။ Intel J ကို Artif 39:357-390.
(1997) ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက်၏ activation ။ NeuroReport 8:1225-1228.
(1999) မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်ဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝ 398:704-708.
လူမှုရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်သင်ယူမှုအာရုံကြောအလွှာထပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 မတ်လ 2012, 7(3):274-281
ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များအတွက်အဓိကဘီဘာအိုမှားယွင်းနေသည်၏နှောက်ဆက်စပ်မှု ဦးနှောက် Cortex, 23 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012, 0(2012):bhs037v1-bhs037
အဆိုပါ anterior နောက်ကျနေခဲ့သည် Cortex မြည်းစမ်းအထောက်အထားမြျှောလငျ့၏ဖောက်ဖျက်ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 12 အောက်တိုဘာလ 2011, 31(41):14735-14744
အမူအကျင့်နှင့်လူမှုစစ်ကူသင်ယူ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Properties ကို အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 14 စက်တင်ဘာလ 2011, 31(37):13039-13045
အဆိုပါ Posterior Medial တိုကျရိုကျ Cortex တားဆီးလူမှုညီညွတ်မှု၏ Downregulation အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 17 သြဂုတ်လ 2011, 31(33):11934-11940
လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု Value ကို၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတွက်ချက်မှု modulates စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 ဇူလိုင်လ 2011, 22(7):894-900
လူသားတွေဟာတစ်ဦး Spatial ဆုံးဖြတ်ချက် Task ကိုအတွက်ရှေ့သို့စီမံကိန်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6ဧပြီလ 2011, 31(14):5526-5539
လူ့ Striatum အတွက် signals Value ကိုဘီဘာအိုထက်ပေါ်လစီ Update ကိုအဲဒီအစားအဘို့အသင့်လျော် Are အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6ဧပြီလ 2011, 31(14):5504-5511
ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်: Intergroup ပြိုင်ပွဲနှင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုမှလူမှုအထောက်အထား Shape ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတုံ့ပြန်ချက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 မတ်လ 2011, 22(3):306-313
Dorsal Striatal အာရုံခံအတွက်ဘီဘာအိုအမှားကုဒ်ဆုချ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 25 သြဂုတ်လ 2010, 30(34):11447-11457
လှုံ့ဆော်မှုသိမှုထိန်းချုပ်ရေး: Task ကို-Switching စဉ်အတွင်းဆွဲဆောင်အားပေးမှုများ Module အကြိုနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Activity ကိုဆု အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,4သြဂုတ်လ 2010, 30(31):10294-10305
ဆုံးဖြတ်ချက်ချလောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်း: သိမြင်မှုနှင့်အ psychobiological ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပေါင်းစည်းမှု တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 27 ဇန်နဝါရီလ 2010, 365(1538):319-330
ဘယ်လိုလူသားတွေဟာရွေးချယ်မှုစဉ်အတွင်းနာကျင်မှုနှင့်ဆုကြေး၏အလားအလာများပေါင်းစပ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 18 နိုဝင်ဘာလ 2009, 29(46):14617-14626
ကလေး schema nulliparous အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် system ကို modulates PNAS,2ဇွန်လ 2009, 106(22):9115-9119
stimulus-ရလဒ်ကို learnability differential တုံ့ပြန်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့မှာ anterior cingulate နှင့် hippocampus မြှင့်လုပ်ဆောင် သင်ယူခြင်း & မှတ်ဉာဏ်, 29 ဧပြီလ 2009, 16(5):324-331
မိခင်များအတွက်မျက်နှာ-Emotion အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကလေးင: လူမှုနှောင်ကြိုးနှင့်အတူ Prefrontal Activation Associated ဦးနှောက် Cortex, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2009, 19(2):284-292
Midbrain Dopamine receptor ရရှိနိုင်လူသားတွေဟာအတွက်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-ရှာတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေတွေနဲ့ပြောင်းပြန် Associated Is အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 31 ဒီဇင်ဘာလ 2008, 28(53):14372-14378
Away ရှင်းပြ: အကျိုးသက်ရောက်စေလိုက်လျောညီထွေတဲ့မော်ဒယ် ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံပတ်သ က်., 1 စက်တင်ဘာလ 2008, 3(5):370-386
neuroscience အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကုသ: လက်တွေ့နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများကနေ New ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို အာရုံကြော, 26 သြဂုတ်လ 2008, 71(9):677-684
အရက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့် Anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ် Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု: ကျနော်တို့သောက်လိုအဘယ်ကြောင့် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 30 ဧပြီလ 2008, 28(18):4583-4591
အလိုအလျောက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရိုအခြ၏ Electrophysiological အချိန်သင်တန်းနှင့်ဦးနှောက်ဒေသများ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 စက်တင်ဘာလ 2007, 2(3):174-188
အဆိုပါ Emotional Brain ၏ dynamic အဖွဲ့: Response, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်မတည်ငြိမ်မှု အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, 1 သြဂုတ်လ 2007, 13(4):349-370
တစ်အရသာမရှိသောဖြေရှင်းချက်ထဲမှာမြည်းစမ်းထောက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားနေ: မြည်းစမ်းအာရုံစိုကျခွငျးအားဖွငျ့အစောပိုင်း Gustatory Cortex ၏ Modulation ဓာတု Sense, 1 ဇူလိုင်လ 2007, 32(6):569-581
လတ်တလောအတွက်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနဲ့ဆက်တိုက်တော့ပူပန် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6ဇွန်လ 2007, 27(23):6313-6319
အချိန်မူလတန်းဆုလာဘ်များအဘို့အဝ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 မေလ 2007, 27(21):5796-5804
ဘေးဥပဒ်တစ်ခု pharmacological မော်ဒယ်အဖြစ် ketamine: စိတ္တမှခန့်မှန်းအမှားထဲကနေ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်, 1 မေလ 2007, 21(3):238-252
နျူကလီးယပ် Accumbens နှင့် Pavlovian ဆုကြေးသင်ယူ အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, 1 ဧပြီလ 2007, 13(2):148-159
ဆုလာဘျ-အခြေခံပြီး Logical ထုတ်ယူ Task ကိုစဉ်အတွင်း Prefrontal နှင့် Cingulate လှုပ်ရှားမှု၏ Dynamics ကို ဦးနှောက် Cortex, 1 ဧပြီလ 2007, 17(4):749-759
ဦးနှောက်မွ Gags စဉ်အတွင်း Activation နှင့်ဘာသာစကားများ-မှီခိုဟာသ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2007, 17(2):314-324
126 Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography နှင့် Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းတစ်ဦးတွင် Meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဘီစီစီအမျိုးအစား Ganglia Functional ဆက်သွယ်မှု ဦးနှောက် Cortex, 1 အောက်တိုဘာလ 2006, 16(10):1508-1521
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာခန့်မှန်း၏ gain- နှင့်အရှုံး-related တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းချက်များနှင့်အမှားများကိုများအတွက် Dissociable စနစ်များကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 13 စက်တင်ဘာလ 2006, 26(37):9530-9537
အစောပိုင်းကလေးဘဝအပြုအမူတားစီးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမြီးကောင်ပေါက်အတွက် Striatal အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတချို့။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 14 ဇွန်လ 2006, 26(24):6399-6405
Medial တိုကျရိုကျ Cortex လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အမှားများမှပျောက်ဆုံးခြင်း-Related တုံ့ပြန်ချက် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 12 ဧပြီလ 2006, 26(15):4063-4070
လူသားတွေဟာအတွက်ဆုကြေးပြန်ကြားရေးထူးခြားသောစာရင်းအင်း Properties ကို၏အာရုံကြော Coding ဦးနှောက် Cortex, 1 ဧပြီလ 2006, 16(4):561-573
stimulus-Action-ဆုကြေးအစည်းအရုံးသင်ယူစဉ်အတွင်းအဆိုပါ Putamen နှင့် Caudate နျူကလိယအတွက်ဆုကြေးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ဆုကြေးမြျှောလငျ့မှားယွင်းနေသည်၏ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2006, 95(2):948-959
လူသားတွေဟာအတွက်ဆုကြေး-အခြေခံပြီးသင်ယူအတွက် Ventral Frontostriatal Circuitry ၏အခန်းက္ပ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 21 စက်တင်ဘာလ 2005, 25(38):8650-8656
အစောပိုင်း-အဆင့်ပြင်းထန်သောရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နှင့်အတူဆုလာဘ်, Motivation နှင့် Emotion စနစ်များ Associated Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဇူလိုင်လ 2005, 94(1):327-337
ကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်သို့သော်မထိန်းချုပ်မှုများအတွက် Methylphenidate အားဖြင့် Orbital နှင့် Medial Prefrontal Cortex ၏ activation: စွဲသက်ဆိုင်သော အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 13 ဧပြီလ 2005, 25(15):3932-3939
လူ့ခွဲခြားရေးသင်ယူအတွက် Caudate နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 16 မတ်လ 2005, 25(11):2941-2951
Angry သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစားသုံးမှုအပြုအမူနှင့်တန်ဖိုးများ၏တရားသဖြင့်စီရင်ရငျဆိုငျပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်မျက်နှာဖုံးမင်္ဂလာမှသတိလစ်ထိခိုက်စေတုံ့ပြန်မှု ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2005, 31(1):121-135
အပြုအမူ: အဦးနှောက်ထဲမှာတစ်ဦးက Marketplace? သိပ္ပံ, 15 အောက်တိုဘာလ 2004, 306(5695):421-423
စိတ်ခံစားမှုဇွဲ: ကြောက်လန့် Extinction အတွက် Prefrontal-Amygdala ဆက်သွယ်မှုအပေါ်တစ်ဦး Update ကို သင်ယူခြင်း & မှတ်ဉာဏ်, 1 စက်တင်ဘာလ 2004, 11(5):525-535
လူ့ Caudate နျူကလိယအတွက်လှုံ့ဆျောမှု-မှီခိုတုံ့ပြန်ချက် ဦးနှောက် Cortex, 1 စက်တင်ဘာလ 2004, 14(9):1022-1030
အမျိုးအစားခွဲခြားသင်ယူစဉ်အတွင်းသိမှုတုံ့ပြန်ချက်နှင့်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်မှလူ့ Midbrain ထိခိုက်လွယ်မှု Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 သြဂုတ်လ 2004, 92(2):1144-1152
လူသားတွေဟာအတွက်ဆုကြေးထုတ်ယူခြင်း၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာ: fMRI ၏ခေတ်သစ်အခန်းက္ပ အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, 1 ဇွန်လ 2004, 10(3):260-268
တစ်ဦးက Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခု Stochastic ဆုံးဖြတ်ချက် Task ကို၏ Imaging ကလေ့လာမှု: Caudate နျူကလိယအတွက်ဆုကြေး-အခြေပြုအပြုအမူသင်ယူတစ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Correlate အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 18 ဖေဖော်ဝါရီလ 2004, 24(7):1660-1665
မျှော်လင့်ထားသည့်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်အဲဒါတွေက Metabolic နှင့်ကင်းချိုးဖောက်မှုများအတွက်စိတ်ကြွ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 10 ဒီဇင်ဘာလ 2003, 23(36):11461-11468
အဓိက Nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ Striatal တုံ့ပြန်မှု အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,3စက်တင်ဘာလ 2003, 23(22):8092-8097
Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ဖွငျ့ပျေါထှနျးခဲ့အတိအကျအဆိုပါ Habenular Complex ၏အခန်းကဏ္ဍသည်ဆုကြေးစနစ်, နှင့် Cingulate မော်တော်ဧရိယာ: ပြင်ပတုံ့ပြန်ချက်ကိုသုံးပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမှားယွင်းနေသည် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 မေလ 2003, 23(10):4308-4314
လူ့ Orbitofrontal နှင့် Cingulate cortical အတွက်သာယာသောနှင့်နာကျင်မှု Touch ကိုကိုယ်စား ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2003, 13(3):308-317
လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးတံတားသောအာရုံကြောစနစ်က: An fMRI လေ့လာမှု PNAS, 16 ဧပြီလ 2002, 99(8):5669-5674
ဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချတစ်အခန်းကဏ္ဍ: anterior cingulate cortex Dorsal PNAS, 8 ဇန်နဝါရီလ 2002, 99(1):523-528
တိုးမြှင့်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဆုကြေး၏မျှော်လင့် selection နျူကလိယ Accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 သြဂုတ်လ 2001, 21(16):RC159